राम गुरुङ - कान्तिपुर समाचार
राम गुरुङका लेखहरु :
निरंकुशताको पुनरावृत्ति !
संसद् विघटनको सर्वोच्च कानुनी व्याख्या आउने नै छ, जसबाट संसद् विघटनको संवैधानिक छिनोफानो हुन्छ; तर सत्य के हो भने, अहिले संघीय संसद्को राजनीतिक अस्तित्व बाँकी छैन । जनताले चुनेका संसदीय जनप्रतिनिधिहरू सडकमा पुगेका छन् ।
असान्दर्भिक बन्दै राजनीतिक दलहरू
यति बेला नेकपा मात्रै गुटबन्दीले थलिएको छैन । कांग्रेसभित्र पनि महाधिवेशनले नयाँ (?) नेतृत्व देला/नदेला भन्ने चर्को सकस छ । ‘राप्रपाहरू’ को एकता त भयो, तर ‘अध्यक्षहरू’ को जोड–घटाउ र विस्तारित संगठनबिनाको नयाँ राप्रपाले उल्लेख्य के गर्ला, भन्न सकिन्न ।
मार्च १६, २०२० मा ‘यूएसए टुडे’ ले एउटा रिपोर्ट छाप्यो । डल्भिन ब्राउनको उक्त रिपोर्टिङ कोरोनाले अत्तालिएको अमेरिकी जनजीवनबारे थियो । यसमा सर्वसाधारणका महामारी–मनोदशा समेटिएका थिए । ट्वाइलेट पेपर मात्र होइन, बन्दुक किन्नसमेत लाइनमा बसिरहेका अमेरिकनको कोरोना असरको प्रतिक्रिया, खबरको विषय थियो । बन्दुक किन्ने ग्राहकको तर्क थियो- घरमा बन्दुक नभए महामारीका बेला आफ्नो सम्पत्ति लुटिन सक्छ । त्यसबाट मान्छे महामारीभन्दा मान्छेसँगै डराएको बुझ्न सकिन्छ ।
इम्पेरियल कलेज लन्डनका अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई मार्च २६, २०२० मा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ— यदि बेलैमा नियन्त्रण नभए कोरोनाको महामारीले विश्वका ७ अर्ब मानिसलाई संक्रमण गर्नेछ ।